Indawo yokuhlala yaseBarbican
UMarco unezimvo eziyi-24 zezinye iindawo.
IDimora il barbacane yindlu ebanzi ebekwe kwilali yakudala yaseTerricciola eyakhiwe ngaphakathi kwinqaba apho inqaba yayimi khona ekuqaleni, isecaleni kwendlela yabahambi ngeenyawo enombono ophefumlayo weenduli, ibuyiselwe ngokupheleleyo ngokubuyisela imiqadi kunye nemiqadi yee-1500s ngokufaka. ngokuvisisana nazo zonke obutofotofo mihla
Ibekwe kumgangatho omnye, ibandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nendawo yokutyela, kunye negumbi lokulala elikhulu elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
ilungele ukuhlala okufutshane kubantu ababini abafuna ukuva ukuzola kwilali yasemaphandleni
ukusuka kwipromenade ekufutshane kunye ne-panoramic terrace ungayonwabela umbono ophefumulayo weenduli zeValdera, ngombono weVolterra, Lajatico., Ngokuhamba kwepanoramic ungabona emiqolombeni yase-Etruscan yeBelvedere hypogeum.
ilali yimizuzu nje embalwa ukusuka edume Teatro del Silenzio kwidolophu Andrea Bocelli, 15 imizuzu ukusuka Volterra, 40 imizuzu ukusuka elwandle, 25 imizuzu ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya Pisa. Imizuzu engama-30 ukuya eLucca kwaye malunga neyure ungafika eFlorence, eSiena .. kunye nezinye iindawo ezintle eTuscany.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-24 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
I-Terricciola namhlanje inikezela ngezakhiwo zakudala zobuhle obubalulekileyo bokwakha.
Indlu kaMasipala - Isakhiwo esaqala ngenkulungwane ye-13-14 - enexabiso elikhulu lokwakha.
I-cylindrical tower - Isabonakala namhlanje kwicala elingasentla-ntshona leendonga zexesha eliphakathi.
I-alleys, i-alleys-iTerricciola yidolophana enemvelaphi yaseRoma esagcina ulungelelwaniso lwedolophu yamandulo kunye neempawu ze-orthogonal alleys, ukusuka embindini ukuya eludongeni.
I-Etruscan Necropolis yaseTerricciola, esusela kwinkulungwane yesi-4 ye-BC, iqulathe uthotho lwamangcwaba amagumbi agrunjwe phantsi kwe-Piazza Matteotti, kwisanti ye-tuffaceous apho idolophu yakhelwe khona.
I-Cantine di Terricciola, esetyenziselwa ukusetyenziswa izihlandlo ezininzi kwiinkulungwane, yenza inkqubo yolwakhiwo olucacileyo.
L'antica Fonte-Ecaleni kwendlela ehamba ecaleni kweLe Cantine
Yayisaziwa ngokuba yi "Fontaccia", iqalela kumaXesha Aphakathi kwaye kwixesha elidlulileyo yayingumthombo wobonelelo olubaluleke kakhulu kubemi. Namhlanje isetyenziselwa ukunkcenkceshela amasimi kunye nokunkcenkceshela izilwanyana. I-Municipal Park - Indawo eluhlaza egcwele imithi yeenkulungwane zakudala